RW Kheyre oo ku wajahan Kismayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 11 March 2019
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay laga dareemayay qaban qaabada soo dhaweynta wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo ku wajahan Magaaladaas.
Kheyre ayaa dhawaan dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa Kismaayo sababo la xiriira ka qeyb galka Aaska Wasiirkii Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dhawaan ku geeriyooday Magaalada Dubai ee Wadanka isutaga Imaaraadaka Carabta.
Hayeeshee Magalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee soo dhaweynta wafdiga Ra’iisul Wasaaraha, waxaana wadooyinka waaweyn ee Magaalada Kismaayo lagu xardhay Sawirrada Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo kuwa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sidoo kale Maalma ka hor Magalada Kismaayo waxaa gaaray wafdi horudhac u ah safarka Kismaayo ee Ra’iisul Wasaaraha iyo qaar ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Amniga Magalada Kismaayo ee gobolka Jubabda Hoose ayaa aad loo adkeeyey, waxaana sugaya Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya, iyada oo la dhigay wadooyinka ugu muhiimsan ee Magalada Kismaayo.
MD Farmaajo canaan u jeediyay Taliyeyaasha Ciidamada Dowladda (AKHRISO)